Haiti: Herintaona lasa izay…Tsaroantsika tsara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2011 13:09 GMT
Vakio amin'ny teny Português, македонски, Español, Italiano, polski, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Shqip, Français, English
Herintaona androany (12 Janoary 2011) ny nitrangan’ ilay horohorontany tao Haiti. Mahatsiaro izany ny mpitoraka bilaogy Haitiana…
Manoratra ny vohikala Haitiana The Livesay :
Eto dia namoaka ny hevitry ny Haitiana iray mpikambana ao anatin'ny zanaka ampielezana mikasika ny fizarazarana io bilaogy io :
Nikiakiaka aho tao an-trano ary nihazakazaka ny nenitoako nijery izay nanjo ahy, notantaraiko azy avy eo ilay voina, tsy tadidiko tsara ny filahatry ny zavatra nitranga rehetra fa ny tadidiko dia izaho niezaka niantso ny Ray aman-dReniko tao Haiti nefa tsy nahenoako valiny, namadika fahitalavitra aho ary azoko antoka fa tao no nahitako an'i Carel nampita ny zava-niseho miaraka amin'ny ranomaso, tena nahaontsa ahy ny nihaino ny feony izay kivy dia kivy tokoa.
Tao amin'ny Twitter, ireo tenifototra miresaka momba ny herintaona nitsingerenan'ny horohorontany dia #remember #Haiti – ary ny olona tao amin'ny Tweet dia nampiasa io sehatra fitorahana bilaogy kiritika io ho hanaovany izany monja:
Mbola miezaka mandanjalanja izany hatrany ireo mpitoraka bilaogy ao Haiti. Nanoratra ny bilaogy The Apparent Project :
Mikasika izay indrindra, nandefa tweets maromaro mikasika ny fanokanana ilay tsena vao namboarina antsoina hoe Iron i @RAMHaiti :
Henoko ny anjombon'ny fiarakodian'ny polisy. Nanatrika akaiky ny fanokanana ilay tsena antsoina hoe Iron tao Port au Prince #Haiti ny filoha Clinton
Raha izaho nandeha fiara ho any amin'ny tanànan'i Port au Prince iny. Tsy azoko an-tsaina hoe aiza ho aiza no misy ahy.. #Haiti #EarthQuake [#Horohorontany]
Ankehitriny, na tamin'ny alalan'ny tweets, na tononkalo na sosokevitra mikasika ny fomba atao mba hanadinoina izany, dia tsy am-pisalasalana no ilazàna fa voalohany ao an-tsain'ny mponina ao amin'ny tontolon'ny bilaogy io tsingerintaona mampalahelo io. Mety i Shelley Clay no mahay mamintina izany indrindra – androany dia zava-dehibe io fahatsiarovana io satria mikasika ny vahoaka Haitiana:
Ny sary rehetra hita ato anatin'ity lahatsoratra ity dia nalain'ny caribbeanfreephoto, nahazoan-dalana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons License. Raha hitsidika ny sary mifandimby ao amin'ny kaonty flickr an'ny caribbeanfreephoto dia tsindrio eto.